Lugood Video Editor: Sida loo Edit Lugood Videos
Ma doonaysaa barnaamij xaalkaa kartaa iibsaday ama lagala soo bixi Lugood video? Sida u tageynaa dhowr qaybaha, jarida qaybo ka mid ah si aad u hesho waxa ay ka yar, ama biirtay dhowr video clips in la abuuro shaqo cusub? Fiiri hoos ku jid oo sahlan si aad u hesho shaqo samaysay.
Qaybta 1. Edit Lugood videos la Wondershare Video Converter
Qaybta 2. videos Edit in Lugood leh Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Qeybta 1: Edit Lugood videos la Wondershare Video Converter
Wondershare Video Converter waa codsi feature-hodan ah diinta fan set oo ah qalab video tafatirka aasaasiga ah. Sida a video editor Lugood, waxa aad u saamaxaaya in ay jar ka soo qayb aan la rabin, baararka dalagga ka soo madow, ratio isbedel arrin ka 4: 3 16: 9 iyo qeybsanaan ku xigeenka, shaandheyn 90 darajo u socoto, anti-bilow dhanka, ku dar fur-in subtitles, codsan saameyn gaar ah, iyo in ka badan. Isku day lacag la'aan ah hadda.
Tani video editor Lugood ayaa interface horyalka Talyaaniga, iyo hawlaha oo dhan waa mid aad u anfacaya iyo fududahay in la isticmaalo. Haddii aad rabto inaad ku biirto dhowr clips galay mid ka mid ah oo dhan, kaliya sax ah "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" sanduuq ee ugu hooseysa. Marka aad buuxiso Lugood video tafatirka, doortaan qaab aad u jeclaystay in uu furmo qaab wax soo saarka, iyo ku dhuftay Beddelaan si aad u hesho doonayso in aad wax soo saarka video.
Muhiim : Barnaamijkan waxaa inta badan loogu talo galay inay buuxiyaan aasaasiga ah video tafatir, iyo dhoofin karto badan videos waqti. Sidoo kale, in aad qaab kale video sida AVI, MOV, wmv, iwm tafatir dheeraad ah la iMovie, Windows Movie Kan sameeyey, iwm badalo kartaa video Lugood
Qeybta 2: Edit videos in Lugood leh Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) waa codsi awood weli fududahay in la isticmaalo video tafatirka kaa caawinaya in aad ka video Lugood in daqiiqo abuuro movie xirfad-raadinta. Ka sokow qalabka tafatirka video aasaasiga ah, waxa ay bixisaa 300+ filtarrada saamayn, kala guurka, horyaal, codad aad u shakhsiyeeyo aad video Lugood. In ay casriyayn ugu dambeeyay, waxa uu xitaa ku darayaa muuqaalada qaar ka mid ah oo gaar ah sida Jump jarid, baaqiga jir ah, Muuse, Janjeeri-wareejin si wax loogu qabto in ka badan wax soo saarka video xirfadeed. Download hoos ku maxkamad lacag la'aan ah si ay u sahamiyaan awoodaha ay hadda.
Hoos waxaan ku tilmaami doonaa tallaabooyinkan fudud si aad xaalkaa Lugood video in madal Windows. Users Mac gudbin karaan in ay Guide User wixii faahfaahin dheeraad ah.
1 Import Lugood videos
Darsada video Lugood galay uu furmo suuqa hoose by jiitaa-n-dhibic. Ama guji "Import" xitaa files ee suuqa kala pop-up, oo waxay u wada shuban. Dhammaan files laga keeno lagu soo bandhigi doonaa sida thumbnails in shayga saxaarad bidix. Ka dib markii in, jiididda iyo files dhibic si ay Timeline Video ee tafatirka.
2 Edit Lugood videos qalab ku anfacaya
Hadda wadi Lugood video sixiddiisa hoos siyaabood:
Dhammaan qalabka tafatirka caadiga ah: Flip, goo, Dalag, isku beddesha, Split, Dheellitir dhalaalka / barbardhigo / daran ah, audio Aamusi, dardar / Xawaarahaaga hoos ciyaaro xawaaraha, bedesho mugga audio, iwm
Shakhsiyeeyo video: Ku dar qurux badan oo macno kala guurka, intros / credits, qoraalka, dalban saamaynta gaar ah, saamayn audio, iyo in ka badan.
Wow dadkii badnaa: Samee sawir-in-sawir saamayn, dalban cut boodaan si ay u sameeyaan video haray, bedelo wejiga dadka la sawirka madaxa la doortay, iyo wixii la mid ah.
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan wuxuu taageeraa oo dhamaystiran jiitaa-n-dhibic, iyo dhammaan hawlgallada la soo celin karin sida ay u howl tirtireyso / noqo.
3 Save abuurkiinna
Hadda si toos ah uga app la saaxiibadaa on YouTube, Facebook, Twitter iyo wadaagno masterpiece. Si tan loo sameeyo, guji "Abuur" u muujiyo uu furmo suuqa wax soo saarka, oo taga si ay "YouTube" tab in la buuxiyo macluumaadka looga baahan yahay koombiyuutarka.
Haddii kale, dooro "qaab", iyo dooran wmv, MOV, AVI, MP4, iwm sida qaab wax soo saarka ah ee loo maqli haboon on your computer ah. Si aad lacag la'aan ah aad disk adag ama ku raaxaystaan ​​ku saabsan filimada guriga, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad ku gubi Lugood video inay DVD.
Talooyin Bonus : Haddii aad la kulanto baadi-dejinta marka dejinta qaarkood M4V files galay Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), fadlan qaataan kor ku xusan Wondershare Video Converter in uu kelmadaha aad video hore. Markaasay aad edit karaa faylasha M4V aan wax dhibaato ah.
Video Tutorial: Sida loo Edit Lugood Video la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
> Resource > Video > Sida loo Edit Videos Lugood